Funda ikhulu leminyaka yokulondeka kwiiyure ze-12 - ii-Geofumadas
Khawucinge ukuba uhambo olude lweeyure ze-12, kwaye ufuna ukufunda umvuzo we-García Márquez Nobel ngeli xesha.
Indlela efanelekileyo kukuthenga le ncwadi kwaye uyifunde kwi-romance endala, i-dollar ye-26 kwi-Duty Free, kuba incwadi ayizange ihambe kwilayibrari kwaye ifunde ngokuzithandela ilungile. Ungayithenga kwakhona kwi-Amazon nge-$ 13 kunye nokuthunyelwa kwempahla, ezi ntlobo zemisebenzi azifumaneki Uhlobo, kodwa ukuba ndiya ku-$ 10.
Enye indlela enye yokuphulaphula ngendlela echanekileyo, kuba ezinye izixhobo ezisisiseko zihlala kunye nemizuzu elishumi elinesine ubuncinane. Yindlela enhle kakhulu yokusebenzisa loo mahambo okanye iiyure ngelixa ulindele umntu omthandayo kodwa ongakhange akhuphe.
1. Khuphela kwi-intanethi
Ndimele ndacacise, ukuba kukho ezininzi iincwadi zakudala ezaziphelelwa ngumgaqo-copyright okanye zazingabhalwanga, kwaye ezi ziza kulandwa kwi-Intanethi ngaphandle kokungabikho mthethweni. Kule meko ndiya kunika umzekelo weMinyaka eyiMinyaka yoBungqina, kuba nguyena nje ndifunda kwakhona le ntsuku (kodwa kwindlela endala) ukuqonda isinyathelo esilandelayo UMel Zelaya, ngoku i-Neerlandia iya kuqalisa ukuqala (yilapho exelela kubo: bathathe apho apho ... ndiyazi into abayifunayo).
Ngeenjongo zemfundo, le yindawo apho kukho izixhumanisi kwiincwadi ezikhoyo kwi-txt, doc kunye neefomati ze-pdf:
2. Yiguqulele kwi-txt
Oku kufuna kuphela ukuba uvule ifayile kunye ne-Adobe Reader 9, kwaye xelele ukuba ulondoloze njenge-txt. Ifayile ye-1.9 MB idluliselwe kwi-808 kb.
3. Guqula umbhalo kwi audio (txt kuya wav)
Kule nto esiyisebenzisayo ESodelsCotXa ukhetho ukuguqula umbhalo kwi odiyo, sikhetha ifomati yefayile yombhalo, ndikhetha wav kuba mp3 uye mgangathweni nangona ubunzima na ngaphantsi, ngoko rhoqo 12 kHz kwaye hlalani isebenze le XML ukhetho tags alunanzwanga.
Ngokucindezela inkinobho ethi "guqula", inkqubo iyaqala kwaye ngemizuzu ye-11 nje ifayile iguqulwa. Iphepha le-494 kwifom ye-8 "x4" kwifayile ye-997 MB ngexesha leeyure ze-12 kunye nemizuzu yokufunda ye-57 ngenhlonipho ecacileyo yamanqaku.
Ngoko ke umcimbi wokuwubeka kwimemori Aigo kwaye ujabulele uhambo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuvavanya i-Aigo MP5, eziliqela kwenye
Post Next I-Seminar kwi-PowerCivil yaseLatin AmericaOkulandelayo "